विन्ड टर्बाइन कन्स्ट्रक्सन कार्यशाला सुरु - Online Majdoor
विन्ड टर्बाइन कन्स्ट्रक्सन कार्यशाला सुरु
२५ असार २०७६, बुधबार ००:५७
भक्तपुर, २४ असार । ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा मङ्गलबार विन्ड टर्बाइन कन्स्ट्रक्सन वर्कशप (Wind Turbine Construction workshop) को उद्घाटन र अतिरिक्त क्रियाकलापको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको उद्घाटन भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवम् कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले नेपाल सरकारले भारतको दबाबमा नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु अनुचित भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिप्रधान देश भएर पनि खरबौंँ कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यार्थीहरूले देश र समाज अगाडि बढ्ने ढङ्गले काम गर्न र समाज परिवर्तन गर्ने भावनाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजले भएका स्रोतसाधनको उपयोग गरी अनुसन्धानमा जोड दिइरहेको बताउँदै उहाँले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई रु. ५ लाखसम्म सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको र युवा लक्षित गतिविधिमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।
ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य सुजन माकले कलेजमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउँदै इन्जिनियरिङ शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन ख्वप इ. कलेजका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा अभ्यास गराइरहेको बताउनुभयो ।
ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य सुनिल दुवालले विद्यार्थीहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापको आवश्यकता औँल्याउँदै हालै संसद्मा पेश भएको पारमाणविक र रेडियोधर्मी विधेयकबारे छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङका उपप्राचार्य रत्नशोभा प्रजापति र काठमाडौँ पावर एन्ड इन्डष्ट्रिका स्रोतव्यक्ति किमोन सिलवालले पनि बोल्नुभएको उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले कलेजद्वारा आयोजित विभिन्न खेल र चित्रकला प्रतियोगिताका विजयीहरूलाई प्रमाणपत्र र मेडल प्रदान गर्नुभयो ।